Pipefish - Olwandle - Iningizimu Afrika
Ejwayelekile ingamasenzimitha ayi-12 kodwa ingakhula ize ifike kwangama-60.
Lezi zinhlanzi zinomzimba omude ozacile, njengenyoka, ikhala eliphusheke phambili nomlomo oqala ngasekupheleni kwekhanda. Zine-fin lokugwedla elilodwa emhlane nelilodwa elisandilinga emsileni. Umzimba walezi zinhlanzi umaguzuguzu. Ziyashiyana ngemibala. Ezinye zalezi zinhlanzi ziyaba nemigqa emikulu eyimibala obomvu, ophuzi noyi-olintshi.
Umndeni wezinhlanzi owaziwa nge-Syngnathinae unemikhakha engama-23 nezinhlobo eziyi-120. Lezi zinhlanzi ziphinde zifakwe emndenini owodwa nama-seahorse (amahhashi olwandle). I-fin elisemhlane lisebenza uma kugwedlwa kuyiwa phambili.
Uma ibamba ukudla, le nhlanzi uyamunca. Eyesilisa inendawana esasipontshi lapha amaqanda ebekwa khona, azaliswe aphinde agcinwe khona aze achamisele. Ezinye zalezi zinhlanzi ziphuma siphelele kanti ezinye ziphuma zisengoshobishobi.
Lezi zinhlanzi zidla izilwanyana ezincane ezingenamathambo.
Zitholakala olwandle ezindaweni ezinamazinga okushisa akahle nezinamazinga ashisa kakhulu.
Black-breasted pipefish (Corythoichthys nigripectus)
Cleaner pipefish (Doryrhamphus janssi)